Wararka Maanta: Arbaco, May 9 , 2012-SHEEKH AXMED DHICISOOW: "Maalinta Jimcaha ah waxaa dhacaya Mudaaharaad looga soo horjeedo dastuurka cusub"
Sheekh Dhicisoow ayaa sheegay in dastuurkan uu yahay mid uga daran shirkii Baarliin ee lagu qaybiyay Soomaaliya, isagoo xusay in qodobbadiisa ay ka mid yihiin kuwo lagu doonayo in Soomaaliya loogu qaybiyo boqol qaybood.
"Maalinta Jimcaha ah waxaa dhacaya mudaaharaad ay ka qaybgalayaan hal milyan oo qof oo looga soo horjeedo dastuurka cusub ee Soomaaliya, waxaana qabnaa haddii sidan lagu ansixiyo inuu khatar weyn ku yahay dalka iyo dadka," ayuu yiri Sheekh Dhicisoow.
Guddoomiyaha Majmaca Culummada Soomaaliyeed ayaa hadalkiisa ku daray inay mudaaharaadkooda Dowladda kaga codsanayo adduunka ku ogeysiinayaan waxa ay doonayaan.
Ma ahan markii ugu horreysay oo ay hay'adaha culummada Soomaalida ay kasoo horjeestaan dastuurka cusub ee Soomaaliya oo ay ku tilmaameen mid ay ku jiraan qodobbo badan oo ka horimaanaya diinta Islaamka.
Lama oga sida uu ku qabsoomi karo dibadbaxa ay culummadu sheegeen inay uga soo horjeedaan dastuurka, iyadoo xukuumadda KMG ah ay toddobaadkii hore soo saartay digniin ku saabsan inaan la qaban karin shirar iyo dibadbaxyo aan lagu soo wargelin.